Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကလဲ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများကို အရှိန်မြှင့်နှိမ်နှင်းနေပြီ၊
တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကလဲ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများကို အရှိန်မြှင့်နှိမ်နှင်းနေပြီ၊
ဝါရင့်ဒီမိုကနေစီလှုပ်ရှားသူ ဝမ်းင် ရောင်းကင်း Wang Rongqing အားနိုင်ငံတော်ကိုအကြည်ညိုပျက်စေတဲ့စွဲချက်နဲ.ဟမ်းင်ဇူ ပြည်နယ်တရားရုံတစ်ခုကထောင်(၆)နှစ်စီရင်ချက်ချခဲ့သည် ဟုတရုတ်လူ.အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်သူများကပြောပါသည်၊
ဝမ်းင်ရောင်းကင်းဟာ ၁၉၉၀ ခုနှစ်နှောင်ပိုင်းတွင် အတိုက်အခံတွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ရာမှာကူညီခဲ့သည်၊တရုတ်ကွန် မြူနစ်အစိုးရက၎င်းတို.၏တစ်ဦးပိုင်စနစ်ကိုဘယ်သူကမှစိန်ခေါ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါဘူး၊ခွင့်ပြုထားသောပါတီတစ်ချို.ကိုလည် အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုထားသည့်ပါတီများဖြစ်ရပြီးကွန်မြူနစ်အစိုးရနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည့်အရေးထက် သူတို.၏အကြံပေးသူများအဖြစ် ထမ်းဆောင်နေရသည်၊
မကြာခင်ရက်သတ္တပတ်များကစပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများကိုစတင်နှိမ်နှင်းလာနေသည် ဟုသုံး သပ်သူများကပြောပါသည်၊လွန်ခဲ့သောလတုန်းကလဲတရုတ်အစိုးရက လုန်းဆောင်ဘို Liu Xiabo ကိုထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်၊ (လုန်းဆောင်ဘိုဟာ ၁၉၈၉ တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဘီ်းဂျင်ကျောင်းသားများဦးဆောင်သော Tiananmen Square အရေးအခင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည်၊အရေးအခင်းဟာလွတ်လပ်မှုနှင့်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်တောင်
ပညာရှင်များ အယောက် ၃၀၀ အထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်သည်၊
ကွန်မြူနစ်အစိုးရလက်ကိုင်ဒုတ်ရဲတွေကလဲကွန်မြူနစ်တစ်ပါတီအုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ရေးအပါအဝင် လွတ်လပ်ခွင့်ပိုရှိသော၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည့်စုံသောတရုတ်ပြည်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အမိန်.ပြန်တမ်းကိုလက်မှတ်ထိုးထားသောစာရေးဆရာ၊အနု
Veteran Chinese activist jailed
A veteran democracy activist in China has been sentenced to six years in jail for helping set up an opposition party, activists and supporters have said.
A court in Hangzhou sentenced Wang Rongqing on charges of "subversion of state power", according to the China Human Rights Defenders.
Wang had helped to set upapolitical group called the China Democratic Party in the late 1990s.
China's ruling Communist Party does not allow challenges to its monopoly.
It does allowafew alternative parties, but they have to be officially recognised by the government and serve as advisers to the Communist Party rather than competing against it.
Analysts say that China appears to have been cracking down on dissent in recent weeks.
Last month the government detained Liu Xiaobo,aveteran of the Tiananmen Square movement who launched Charter 08, an online petition calling for democracy.
Mr Liu was one of more than 300 prominent Chinese intellectuals to sign the petition, which was released to coincide with the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Chinese police have also begun questioning other writers, artists and intellectuals who signed the charter, which calls for greater freedoms and democratic reforms in China, including an end to Communist one-party rule.